जन्मभूमीका लागि सबैले सकेको योगदान गरौँ ।
6 months ago 495
पर्वत जिल्लावाट प्रवासमा रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय र नोकरी गर्ने व्याक्तिहरु जिल्लाको हितमा विभिन्न संस्था गठन गरि समाजसेवामा योगदान दिईरहेका छन् । यस्तै संस्था मध्येको एक हो पर्वत सेवा समाज । समाजका विभिन्न देशमा सञ्जाल रहेका छन् । त्यहि संस्थामा लाखौँ प्रवासी नेपालीहरु आवद्ध रहेका छन् । उनीहरुले यहि संस्था मार्फत विभिन्न सामाजिक कार्य, सहयोग र जन्मभुमीको समृद्धिका लागि योगदान गरिरहेका छन् । आज हामीले पर्वत सेवा समाज वेल्जियमले गरेका कार्य र आगामी कार्ययोजनाको वारेमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ । पर्वत सेवा समाज वेल्जियमका अध्यक्ष झलक केसी संग सहकर्मी रोशन तिवारीले कुराकानी गर्नुभएको छ ।
तपाई पर्बत समाज वेल्जियमको अध्यक्ष भएपछि के के काम गर्नुभयो ?
गत अप्रिलमा भएको अबिधेशन पश्चात स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले काम गर्दै आएका छौँ । हामीले पर्वत जिल्लाका गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको कुरा तपाई सहित सबैलाई थाह छ । गतवर्ष फलेवासको देविस्थान र कुश्मामा वृहत स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेका थियौँ । त्यहाँ करिव २ हजार जनाको स्वास्थ्य परिक्षण गरियो । गाउँमा उपचारको सेवा नपाएका व्याक्तिलाई वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा। अनिल भट्टराईको नेतृत्वमा भएको स्वास्थ्य शिविरमा मुटु, पेट, छाती लगायतका समस्या भएका विरामीहरुको सेवा दिने काम हामीले गरेका थियौँ । त्यस्तै यो अवधिमा पर्वतका धेरै विद्यालयमा शैक्षिक सामाग्री वितरण, न्यानो लुगा वितरण गर्ने काम गरेका छौँ । हामीले विभिन्न रोग लागेका व्याक्तिलाई पनि सहयोग गरेका छौँ ।
पर्वत समाजका आगामी कार्यनिति र रणनिती के के छन् ?
मैले पहिल्यै पनि भने हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक उत्थानमा काम र्ग । नामले पनि प्रष्ट हुन्छ । हामी सेवामा समर्पित छौँ । हामी पर्वत वाट प्रवासमा आएपनि हामीले समृद्ध पर्वत हाम्रो अभियान भन्ने नारा तय गरेर अगाडी वढेका छौँ । हामीले पर्वतमा अव सबै ७ स्थानीय तहमा अव वृहत स्वास्थ्य शिविर, शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने, वृद्धाश्रमका लागि सहयोग गर्ने सोचमा छौँ । हामीले गतवर्ष फलेवास र कुश्मामा शिविर सञ्चालन गरेको अनुभवले अव पर्वतका सबै ठाउँमा शिविर सञ्चालन गरौँ भन्ने ठानेर अव निकट समयमा हामीले स्वास्थ्य शिविर लिएर आउँदैछौँ ।
तपाईहरुले पर्वत समाजमा आवद्ध हुन चाहनेहरुलाई कसरी आवद्ध गराउने गर्नुहुन्छ ?
हामी पर्वतवाट आएका व्याक्तिहरुको संस्था भएकाले पर्वतवाट यहाँ वेल्जियममा आएर वस्नुहुने सामाजिक सन्जाल, टेलिफोन मार्फत भेटघाट हुन्छौ ।हाम्रो अभियान कुनै कोठाभित्र मात्रै सिमित छैन । प्रत्येक दुई महिनामा हामीले नियमित वैठक गर्ने गरेका छौँ । वैठकमा हामी संग आवद्ध भएका साथीहरुले नै आवद्ध नभएकाहरुलाई ल्याउनुहुन्छ । २००५ मा स्थापना भएको यो समाज हामी सबै पर्वतवाट आउने दाजुभाई दिदिवहिनीको परोपकारी साझा संस्था हो । त्यहि भएर सबैले एउटै घर जस्तो ठानेर हामीले खोज्नुभन्दा पनि यहाँ आएका नयाँ सदस्यहरु आफैँ आवद्ध हुन आउने गर्नुभएको छ । सबै संस्थाको आजिबन सदस्य हुनु हुन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाज र पर्वत सेवा समाज वेल्जियमको सम्बन्ध कस्तो छ ?
गत अक्टुवर महिनामा अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाज गठन भएको हो । विश्वभर छरिएर रहेका पर्वतका प्रवासीहरु थोपा थोपा मिलेर नदी वन्छ भनेर हामी विश्वभरवाट एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाज गठन भएको हो । पर्वत समाज एउटा शाखा हो भने अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाज छाता संस्था हो । त्यसैले पर्वत समाज वेल्जियम र अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजको वीचमा नङ मासुको सम्वन्ध हुन्छ । हामीहरु दुवै संस्था परोपकारी संस्था हो । हामी दुवै संस्था एक अर्काको परिपुरकको रुपमा हामीले काम गर्र्दै आएका छौँ ।
पर्वत समाज र वेल्जियममा रहेको अन्य संघ संस्था संग कस्तो सम्वन्ध रहन्छ ?
यहाँका अन्य नेपाली संघसंस्था संग, राजदुतावास अन्य नेपाली संग हातेमालो गर्दै का मगर्दै आएका छौँ । सबै संस्थाहरुसंग हाम्रो सम्वन्ध सुमधुर रहेको छ । हामीले गरेका राम्रा कामको सिको अरु संस्थाले गर्ने गर्छन हामीले पनि अरु संस्थाले गर्ने राम्रा कामको सिको गछौँ । केहि काम गर्दा हामीले सरसल्लाह गर्ने गर्छौँ । पर्वतवाट आउनुभएका सत्र जना अग्रज साथीहरूले बेल्जियम स्थित अन्य संघ संस्थाहरुमा अध्यक्ष भई सफल नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । हाल पर्बतेहरू एनआरएन वेल्जियममा उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित ६ जना कार्यसमिति रहनु भएको एनआरएन केन्द्रिय समितिमा पनि वेल्जियमवाट गोविन्द सुबेदी दाजु एनआरएनको केन्द्रिय मानर्थ सदस्यमा आवद्ध हुनुहुन्छ । यसरी सबै संघ संस्थाहरू संग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ । केहि अभियान गर्न परेमा उहाँहरुले हामीलाई र हामीले उहाँलाई सल्लाह गरेर का मगर्ने गछौँ । हामीहरुका विचमा गाउँमा मेलापात, आलोपैँचो गरे जस्तै सम्बन्ध छ ।
विश्वभरका नेपालीहरुलाई जोड्न पर्वत नेपाल डट कम अनलाईन सञ्चालन भएकोमा तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ ?
निकै खुशी लागेको छ । म र हाम्रो संस्थाको तर्फवाट यो अनलाईनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु । सुचना र संचारको पहुँच विश्वभरका नेपाली सामु पु¥याउने । हाम्रा विचार, गतिविधि, दृष्टिकोण, हाम्रा अभियान र कार्यक्रमलाई विश्वभर पु¥याउन प्रवासी र नेपालमा वस्ने साथीहरुले अनलाईन सञ्चालन गरेकोमा म पुलकित भएको छु । पक्कै पनि यो अनलाईनले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ । यसलाई दिगो रुपमा चलाउन हामीले संस्थागत र व्याक्तिगत रुपमा पनि केहि सहयोग गर्नुपर्छ । हामीले यो अनलाईन हाम्रै एक अभिन्न अंग हो भन्ने ठानेका छौँ ।
अन्तमा स्वदेश तथा विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
सबैले सकारात्मक भावना लिनुपर्छ । हामीमा परोपकारी भावना हुनु आवश्यक छ । हामीले कमाएको केहि हिस्सा हामी जन्मेको ठाउँको लागि खर्च गर्नुपर्छ । हामीलाई हाम्रो जन्मभूमी जति प्यारो अरु केहि हुनेछैन । हामी अहिले विदेशमा केहि न केहि पेशा, नोकरी, व्यवसाय गर्दैछौँ भने यसको केहि हिस्सा हामीले परोपकारी काममा लगानी गर्न सक्यौँ भने आगामी पुस्ताले हामीलाई सम्झिरहन्छ । समाजसेवा र परोपकारी काममा हामी एक एक थोपा हुँदै नदी वन्ने प्रयासमा लागौँ ।
हाम्रो लोकसंगीतलाइ संसारभर चिनाउन छ 1583
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको जीवन - दुई बिहे गर्नु मेरो जिन्दगीको भूल 522
नेपाल टप अञ्जलीको डाक्टर बन्ने सपना 770
‘व्यवसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्छ’ 1053
चर्चामा आउन संस्था खोलेका होईनौँ 1511
पर्वतको समृद्धिमा देशबिदेशबाट लगानी जुटाउनु पर्छ : केदारनाथ शर्मा 498
तिमिल्सीना भन्छन- इमान्दार भएर काम नगरे जनताले माफ गर्दैनन् 150
जन्मभूमीका लागि सबैले सकेको योगदान गरौँ । 495
जनताले प्रश्न सोध्न नपर्ने गरि काम गर्छु ः गिरी 182
समाजसेवा खुसी साट्ने अवसर हो : कुल आचार्य, एनआरएन उपाध्यक्ष 1015